Maxaynu U Samaysanay Xisbiyadda Qaranka? | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Maxaynu U Samaysanay Xisbiyadda Qaranka?
Una Haysta Ateero Ayaantuu Dambi Geystana
Laga Hoos Galo Eeda”………. Abwaan Gaariye
Diblomaasi iyo taariikh yahankii Faransiiska ahaa ee la odhan jiray Alexis de Tocqueville oo noolaa 1805-1859, ayaa mar uu faaqidayay axsaabta Maraykanka, wuxuu yidhi; “Waxa jira rag badan oo Mabda’ leh oo ku jira xisbiyada Maraykanka, laakiin ma jiro xisbi mabda’ lihi” (“There are many men of principle in parties in America, but there is no party of principle”)
Haddaba, waxa jira shan waajibaad oo ay tahay inay xisbiyadda siyaasiga ahi qabtaan kuwaas oo kala noqonaya sidan:-
1-Waxay dejiyaan siyaasadda guud ee wadanka: xisbi waliba waxa uu ugu xusul-duubayaa inuu talada waddanka u qabto inuu ka gun gaadho oo uu hirgaliyo ujeeddooyinkiisa siyaasadeed ee uu aaminsan yahay ee ku jiray barnaamij siyaasadeedkii xisbiga (political manifesto) iyo qodobbadii kale ee ay ummada u ballan-qaadeen intii lagu jiray ololaha doorashada. Xisbiyadu waa inay maskaxda ku hayaan inay sameeyaan wixii u wanaagsan danta guud ee waddanka.
2-Xisbiyadu waa inay si dhow ugu xidhnaadaan dadweynaha oo ay u abaabulaan isku soo baxyo ay shacabku badheedhahooda ka dhiibanayaan mowduucyada waaweyn ee dalka ka taagan. Marka dadweynaha la dhiso fikirkooda siyaasiga ah, waxay noqonayaan qaar si bisayl ku jiro codkooda ugu soo dooran kara dawladda ay doonayaan.
3- Axsaabtu waa inay ka shaqeeyaan xasiloonida siyaasadda wadanka: xisbiyadda tartamaya waxa looga baahan yahay inay u midoobaan in dalkoodu ahaado mid siyaasad ahaan xasilloon oo aanay xiisado iyo kala qaybsanaan gudaha ahi ka jirin. Waa in afkaarta xisbigu aaminsan yahay ay mudnaanta koowaad siisaa in siyaasadda waddanku noqoto mid xididdo adag ku taagan oo aanay gilgilaynin wax qulqulatooyin ah oo saaxada dhabqin kara.
5-Xisbiyadu waa wershadda soo saarta Hoggaamiyeyaasha: shaqada ugu muhiimsan ee xisbi kastaa waa inuu helo jiil hoggaamiyeyaal ah oo loo diyaariyo, loona carbiyo inay ka qaybgalaan doorashooyinka guud iyagoo xambaarsan himilooyinkii xisbigoodu higsanayay oo haddii ay doorashada ku guulaystaan-na soo dhisa dawladda waddanka maamulaysa muddo xileedkaas.
Guddida doorashooyinka Somaliland ayaa 28-kii bishii hore soo saaray natiijadii uga soo baxday diiwaangelintii codbixiyeyaasha doorashooyinka ee dalka laga fuliyay, waxaanay daboolka ka qaadeen in wadarta dhammaan dadka isu diiwaan-geliyay doorashooyinku ay noqdeen 873,331 (Siddeed Boqol iyo saddex iyo toddobaadkan kun, saddex boqol iyo saddex iyo kow iyo sodon qof) gobollada Somaliland oo dhan. Liiskaasi waxay guddidu sheegtay inay sii kala haadinayso oo ay ka saarayaan dadkii mar wax ka badan is diiwaangeliyay iyo kuwa hadhow kaadhka qaadan waaya.
Dhawaaqaas komishanku wuxuu horseeday in taageereyaasha jibbaysan ee xisbiyadeenna qaarkood in ay iskugu faanaan baraha saxaafadda bulshada, iyagoo natiijada ka eegaya xagga beelaha. Qoraaladii taageereyaashu waxay dibedda u soo saartay in doorashada madaxtooyada ee lagu wado inay Somaliland ka qabsoonto daboyaaqada sannadkan la sii saadaalin karo inay noqon karto mid xamaasaddeedu sarrayso.
Ugu dambayn, xisbiyadeenna siyaasaddu ma u dhaqmaan oo codka ummada ma u raadsadaan sida xisbiyada adduunka ka jira, mise waa qaar u dhisan uun in ashkhaas koobani kursiga ku gaadhaan? ma habboon tahay inay hal ku dhig u qaataan tudducan aan ka soo dheegtay kaydkii suugaantii Abwaan Gaariye ee ahayd: